Namuhla, ukwazi ukuthi uzodlala yini "UHippocrates" (Medical Centre). Cherepovets - ukuthi umuzi lapho inhlangano wafunda. Yini-ke ngokukhethekile? Yini amasevisi ngasiphi sipho intengo? Yini bonke abantu kufanele bazi inkampani ngaphambi ukubhalisa lapha edilini lomshado? Yini impendulo wathola kulesi sikhungo? Qonda zonke kulo msebenzisi yesimanje kulula kunalokho sibonakala. Ikakhulukazi uma kahle ukuhlola imibono eminingi mayelana isikhungo esithile wezokwelapha, kanye ukubheka ulwazi yashicilelwa ku-website esemthethweni ye-nhlangano.
Kuyini lokhu inkampani? "UHippocrates" - Medical Center. Cherepovets - ukuthi indawo yedolobha kwenhlangano. kuba umtholampilo yangasese. Futhi uhlobo umndeni.
Lokhu kusho ukuthi lapho kungenziwa ziphathwe njengabantu abadala, nezingane. elula kakhulu! Iziguli eziningi ngokunembile lesi sici ziyaneliswa. "UHippocrates" libizwa umtholampilo multi-izigwegwe. Futhi lokhu kuyiqiniso. Ngenxa iqashe eziningi odokotela ezahlukene. Nokho, umtholampilo kubhekwa isikhungo ikakhulukazi yangasese kuhlinzwa. Phela, lunye eyinhloko ke - kungcono ukuhlinzwa.
Kunoma ikuphi, iningi izimpikiswano ezihlobene nezempilo, lungatholakala ku "UHippocrates" (isikhungo sezokwelapha, Cherepovets). Yini okunye okufanele uqaphele amakhasimende ezingase zivele?
Kuwufanele benaka uhlu oluthile amasevisi anikezwa ngendlela isikhungo sokwelapha. Kunini lapho kufanele ngithinte esebenza ngokukhethekile "UHippocrates"? Hlobo luni usizo olunikezwa-isikhungo multi?
Kusukela namuhla, ungasebenzisa amasevisi alandelayo:
isigenco esiwela kwesokudla;
Futhi banake yokuthi izinhlangano ukunikeza laboratory amasevisi zokuxilonga. Okungukuthi, ungathatha ezihlukahlukene izivivinyo. Kokubili abadala kanye nezingane. Eqinisweni, "UHippocrates" (isikhungo sezokwelapha, Cherepovets) - iyinhlangano okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi jikelele. Futhi akabashiyi izivakashi ngabandayo.
Futhi lapho ncamashi sifundwa corporation? Yini ikheli ezingaba izivakashi kufanele lifike? Njengoba sekushiwo, emzini Cherepovets - lokho endaweni lapho itholakala "UHippocrates". Kuyaphawuleka ukuthi le nkampani iyona kuphela into efana nayo. Yena akanayo amagatsha noma eRussia noma Cherepovets. Yingakho kubalulekile ukwazi ukuthi ncamashi nale ndawo lakhiwa isikhungo wezokwelapha. Mhlawumbe kungaba ngcono ukuthola inhlangano efanayo, kodwa eduze nasekhaya.
Sase indawo - Zasheksninsky. Lapha kulapho inhlangano ikhona. Lena cishe emaphethelweni esigodi okukhulunywe ngaye ekuqaleni. Cherepovets akuyona omkhulu kangaka. Kodwa abaningi ozama ukufuna emtholampilo eduze nasekhaya. Izakhamuzi Zasheksninskogo District Cherepovets - ukuthi ngobuningi izivakashi.
Futhi iyini ikheli lenhlangano uphenyo? "UHippocrates" (isikhungo sezokwelapha, Cherepovets) Sokubambisana ingatholakala engosini ethi: Montclair Street 17 A, Vologda esifundeni. Okuningi, njengoba kuye kwashiwo, azikho amagatsha inkampani akusho.
kungenziwa ngasiphi isikhathi iphathwe esikhungweni wezokwelapha? Lolu lwazi Kubalulekile futhi iklinikhi. Ikakhulukazi kulelo ezikhethekile ikakhulu akhuluma ngokuhlinza.
Isebenza "UHippocrates", izinsuku ezingu-7 ngesonto, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. the Zonke ngamaholide kuphela kufanele ucacise mode wokusebenza. Zonke ezinye inkampani banamathele isimiso fixed. Kuyini lokhu?
"UHippocrates" (isikhungo sezokwelapha, Cherepovets) imodi wokusebenza ngezinsuku zeviki-9 ekuseni kuya ku-8 ebusuku. Okungukuthi, ukusebenzisa kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu (okufakayo) kungaba phakathi 09: 00-20: 00. Umtholampilo ngempelasonto ivulelwe kuphela kuze 7 ntambama. Ngakho, ngoMgqibelo nangeSonto Umenyiwe zisebenza "inhlanganiso yocezuningi" esikhathini 9: 00-19: 00. Ezinye izindaba zika-isikhathi ngeke ibe khona phakathi nendawo, hhayi ukuba zimbize.
Hlobo luni amafoni kungasiza uhlale uthintana inhlangano? Abaningi bathi ukufinyelela kithi kulula. Futhi Kuyajabulisa kakhulu. Ungakwazi ngaphandle kwezinkinga ukuthola iseluleko mayelana amasevisi anikezwa, kanye aphoyintimenti.
"UHippocrates" (isikhungo sezokwelapha, Cherepovets) ifoni ngokuxhumana inikeza okulandelayo - 8 8202 624 002. Ungazama futhi ukubiza usebenzisa - 8 8202 324 463. Uxhumano akuyona amahora amabili nane. Call kungaba ngokuhambisana nenhlangano umbuso. Nokho, lokhu kuyinto ejwayelekile.
Amanani amasevisi nayo ibalulekile. Bona kwabanye bafeza indima ebaluleke kakhulu. Izivakashi bathi izindleko amasevisi anikezwa kulolu cwaningo isikhungo sezokwelapha?
Iningi lamakhasimende sangempela abangaba abonisa ukuthi emtholampilo linikeza amanani isabelomali amasevisi abo. izinqubo ezibizayo ezihlobene nokusebenzelana ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka noma imisebenzi eziyinkimbinkimbi. Zonke ezinye izindleko ongaphakeme amasevisi.
Ukuze ngikwenze kucace - eyamukelayo professional (primary) kubiza ruble 700-800 yesibili - 500-600. Ukuhlaziya fecal - 150 ruble igazi - 250. Ukususwa nezimvukuzane e isilinganiso izindleko 750 ruble. Hhayi abiza kakhulu isikhungo wezokwelapha yangasese. Oyidingayo ukuze ulondoloze abathandi!
Medical Center "UHippocrates" (Cherepovets) ukubuyekezwa izingcaphuno wathola ikakhulukazi omuhle. Population ithi le ndawo ikuvumela ukuba angeke uyithenge ngamali kwezinsizakalo zokwelashwa.
Odokotela - lo muntu kumelwe asinake kwasekuqaleni. Phela, umsebenzi wabo ngokuvamile kuxhomeke ekutheni impumelelo ukwelashwa. Kule ndawo, "UHippocrates" zuza ukubukwa elixutshwe. Futhi ngakho-ke kunzima ukusho ukuthi kuhle kangakanani odokotela abasebenza enhlanganweni.
Yini kahle hle inikeza "UHippocrates" (isikhungo sezokwelapha, Cherepovets)? Kumiswa ngabantu abanolwazi - Odokotela esikhungweni. Ziyazi umsebenzi wabo. Ezigulini iphathwa ngokuqonda nokunakwa. Abaningi iphuzu yokuthi kuba odokotela zokubasiza efanele lapha.
Kodwa kukhona iphawula nokuthi iphuzu hhayi isevisi best. Ngokwesibonelo, ensimini ka-ucwaningo ultrasound. Amanye amantombazane ukuthi abanye odokotela ayengayisebenzisa ukunquma nge-ovulation futhi follicle evelele. Ngenhlanhla, la mazwi - a rarity. Futhi abekho indlela baqinisekisa. Ungase ucabange ukuthi lokhu namaqhinga izimbangi.
Manje kuyacaca ukuthi akha "UHippocrates" (Medical Centre). Cherepovets - umuzi lapho, njengoba kuye kwashiwo, inkampani itholakala. Ngokuvamile lena isikhungo esihle yangasese sezokwelapha wonke umndeni. Lapha ungathola ukunakekelwa ngezokwelashwa multidisciplinary ngamanani akhokhelekayo.
Isimo e-umtholampilo omuhle. Yonke indawo imishini emisha has a redecorated. Kungakhathaliseki kubalulekile lapha ukubhekana? Uma ungafuni overpay nganoma yisiphi ucwaningo, yebo. Into esemqoka - ngokucophelela ukhethe uchwepheshe ngubani Uzoqondisa impilo!
Revaccination - Iyini? Sithola ndawonye